warkii.com » Jose Mourinho Oo Kashifay Naanaystii Mikel Arteta Loo Yaqaanay, Kana Jawaabay Hadal Kasoo Yeedhay Tababaraha Arsenal
Jose Mourinho Oo Kashifay Naanaystii Mikel Arteta Loo Yaqaanay, Kana Jawaabay Hadal Kasoo Yeedhay Tababaraha Arsenal
Tababaraha Tottenham, Jose Mourinho ayaa u jawaabay Mikel Arteta oo amaan u jeediyey ka hor kulanka xaasaasiga ah ee London derby ee ay Arsenal iyo Spurs ku ballansan yihiin Axadda.
Labada tababare ayaa ku kulamaya ciyaartoodii ugu horreysay, waxaana Arteta oo maalin ka hor hadlay uu ku tilmaamay Jose inuu yahay macallin sare oo khibrad badan, laakiin tababaraha reer Portugal oo u jawaabay ayaa dib ugu laabtay waqtigii uu carruurta ahaa Arteta iyo naanaystii loo yaqaanay.
Jose Mourinho ayaa gacan-yare u ahaa Louis van Gaal laba sannadood oo uu ahaa tababaraha Barcelona, xilligaas oo Jose uu ka dallacay shaqada turjumaanimada oo uu kooxdaas uga ahaa tababarihii waqtigaas ee Sir Bobby Robson.
Xilligan, waxa ciyaartoyda da’da yar ee Barcelona ka mid ahaa Mikel Arteta oo ku jiray kulliyadda La Masia, waxaanu Mourinho si fiican u garanayaa sidii ay ahayd kubaddiisa iyo caqliyaddiisa sarraysay, iyadoo uu ugu yeedhi jiray naanays uu hadda dib boodhka uga jafay.
Mourinho waxa uu sheegay inuu Arteta ugu yeedhi jiray ‘Mister’ markii uu aadka u da’da yaraa, waxaanu yidhi: “Waxaan Mikel kula kulmay Barcelona markii uu carruurta ahaa. Halkaas ayaan kala shaqaynayay Van Gaal, Mikel na canug yar ayuu ahaa. Runtii aad buu u yaraa.
“Markaa ilaa halkaas ayaan aqaanay. Waqtiga ayaa ordaya, laakiin waxa aan mar walba xasuusanayaa inuu ahaa wiil da’yar, waxaanay ii samaynaysaa dareen wanaagsan. Markii uu noqday kaaliyaha Pep, waxaan qaab xaraabaadsi ah u bilaabay inaan ugu yeedho, mar walba oo aan la kulmo “Mister” maaha Mikel ee waa “Mister”, mar walbana waanu ku qoslaynay naanaystan.”